Xiaomi Mi ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုစကေး2စကေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ | Gadget သတင်း
Xiaomi Mi ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုစကေး2စကေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပြီ ထပ် Xiaomi ထုတ်ကုန်။ ငါတို့သိတဲ့စက်ရုံ၊ စမတ်ဖုန်းထက်ကျော်လွန်သွား နှင့်ဝတ်ဆင်။ ထိုအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးနိုင်သကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောသဘာဝတရား၏ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်သည်။ ယနေ့တွင်သင့်အား၎င်း၏ပထမဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သော Mi Body Composition Scale2နှင့်အလွန်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုသင်ယူဆောင်လာသည် ကစျေးကွက်အပေါ်ထုတ်ကုန်အသစ်မဟုတ်ပါဘူး ဤပစ္စည်းအမျိုးအစားများ (ဤသည်မှာတစ်နှစ်ကျော်ရောင်းပြီဖြစ်သည်) အသစ်တစ်ခုကိုဆူးရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်.
Xiaomi သည်ထုတ်လုပ်မှု၏များပြားသောရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူအောင်မြင်မှုအပြီးတွင်အောင်မြင်မှုဆက်လက်ရရှိခဲ့သည်။ Mi Body Composition Scale2ကသက်သေပြနေသည်။ ပင်စကေးတစ် ဦး ခြားနားချက်စေနိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်ထက် ပို၍ ဝယ်လိုအားပိုမိုသည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ရန်နှင့်သူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုခြေရာခံရန်ဆုံးဖြတ်သူများအတွက်ဖြစ်သည်။
1 အကြှနျုပျ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုစကေး 2, သင့်ရဲ့အလေးချိန်နှင့်အများကြီးပိုထိန်းချုပ်ထားသည်
2 ဤသည် Mi ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုစကေး2စကေးဖြစ်ပါတယ်
4 ကျွန်ုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုစကေး ၂ ၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုအမြင့်ဆုံးသော App တစ်ခု
အကြှနျုပျ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုစကေး 2, သင့်ရဲ့အလေးချိန်နှင့်အများကြီးပိုထိန်းချုပ်ထားသည်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မရင်းနှီးပါက၊ အလေးချိန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များထက်ကျွန်ုပ်တို့အားအတိုင်းအတာတစ်ခုထက်မပိုစေဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သင်တက်သည်၊ သင့်အလေးချိန်နှင့်အခြားအနည်းငယ်သာအချက်အလက်များကိုရရှိသည်။ ကောင်းပြီ၊, အကြေးခွံကိုလည်းနည်းပညာအသစ်များလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပါပြီ။ ယခု Xiaomi ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်ရလဒ်နှင့်တိုင်းတာမှုအမြောက်အများကိုသင်ရရှိနိုင်သည်.
မှန်ပါတယ်၊ စကေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းနှင့်ဆက်စပ်သည် Bluetooth 5.0 မှတဆင့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူး။ မရနိုင်သောအချက်အလက်ပမာဏနှင့်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ကွဲပြားခြားနားသည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာချစ်ပ်များနှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလေးချိန်အပေါ်အခြေခံပြီး parameters တွေကိုတွက်ချက်ကြောင်း algorithms နှင့်ဒေတာထဲသို့ဝင်နှင့် အလွန်တိကျတဲ့ software ကို ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။
အဆိုပါ Mi ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုစကေး2ဖြစ်ပါတယ် သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးသင်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ဖြစ်သည် သင်ကတိုးတက်စေရန်ဆုံးဖြတ်ကြလျှင်။ ကျနော်တို့နှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်ရရှိပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမက်ထရစ် ၁၃ ခုအထိ လက်ရှိ။ သင့်ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ညွှန်းကိန်းကိုအခြားအချက်အလက်များအကြားသိပါ သင့်ရဲ့အဆိုးဆုံးမှတ်တမ်းများတိုးတက်စေရန်အကြံပေးချက်များကိုရယူပါ.
ဤသည် Mi ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုစကေး2စကေးဖြစ်ပါတယ်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Xiaomi Mi ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုစကေး၏မူကွဲအသစ်သည်ပထမဆုံးပုံစံနှင့်လက်တွေ့ကျသည်။ အဓိကကွာခြားချက်မှာ "ပရီမီယံ" ပစ္စည်းများပိုမိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည် အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ရုပ်ပုံကိုပေးတယ်။ ငါတို့ရှာတယ် အဖြူ tempered ဖန် အဆိုပါနင်းareaရိယာ၌တည်၏။ ဒီဇိုင်း ရိုးရှင်းသကဲ့သို့ကြော့။ ၎င်းသည်ထောင့်များကိုအဝိုင်းလိုက်ပြီးချောမွေ့ပြီးသာယာသောကြွေများကိုပေးသည်။
La Integrated LED display ကိုဖန်ခွက်အောက်မှာဝှက်ထားတယ် စကေးပျင်းရိသောအခါ။ ပြီးတော့အလေးချိန်ဖတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြသတဲ့အခါမှာပြတယ်။
အောက်ခြေမှာကျနော်တို့ထည့်သွင်းဖို့ box ကိုရှာပါ ဘက်ထရီဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်လိမ့်မည်4AAA အရွယ်အစားဘက်ထရီ။ Xiaomi ရဲ့အဆိုအရဘက်ထရီအချို့ သူတို့ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်, စကေး၏ "ပုံမှန်" အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ, တစ်နှစ်ကျော်.
box ထဲမှာကျနော်တို့ကပို extras သို့မဟုတ်အံ့သြစရာမတှေ့ဘူး။ စကေးကိုယ်နှိုက်နှင့်ဘာသာစကားများစွာအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်ညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူ box လေးတစ်ခု။
La အဓိကလုပ်ဆောင်ချက် အတိုင်းအတာတစ်ခု၏၏ အတိအကျတတ်နိုင်သမျှအလေးချိန်ကိုတိုင်းတာ။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့ငါတို့ရဲ့ဘဝနဲ့အစားအစာကိုပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂရမ်တိုင်းကရေတွက်တယ်။ ဒါကြောင့် Mi Body Composale Scale2မှာaအံ့သြဖွယ်တိကျမှုနှင့်အတူ G-shaped မန်းဂနိစ်သံမဏိအာရုံခံကိရိယာ။ ကီလိုဂရမ်၊ ပေါင်များအကြားတိုင်းတာမှုများကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည်ဖြစ်သည် အလေးချိန်ကွာခြားချက် ၅၀ ဂရမ်အထိတိကျသောအချက်အလက်.
အဆင့်မြင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BIA ချစ်ပ် ငါတို့ရနိုင်တယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အပြည့်အစုံ တိကျသောနှင့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ။ The ပီဆို, BMIရာခိုင်နှုန်း ကိုယ်ခန္ဓာအဆီ, ကြွက်သားထု၊ အစိုဓာတ်၊ ပရိုတင်းဓာတ်၊ ဗီဆဲလ်အဆီ၊ Basal ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု၊ အရိုးထုထည်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်တမ်း၊။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုဤမျှလောက်သိသလား
ကျွန်ုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုစကေး ၂ ၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုအမြင့်ဆုံးသော App တစ်ခု
ရေးသားသူ: Huami Inc.
ပြည့်စုံသောစက်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်သဟဇာတဖြစ်သောယေဘူယျအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကိုယ်ပိုင်အသုံးချပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားကွာခြားချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲပြောလေ့ရှိသည်။ ၎င်းမှကမ်းလှမ်းသောအသုံးပြုသူအဆင့်အတွေ့အကြုံ ကျွန်ုပ်၏ Fit Mi Body Composition Scale2သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်အချက်အလက်တစ်ခုချင်းစီကိုထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည် အံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့ဖန်တီးနိုင်တယ် 16 ကွဲပြားခြားနားသော profile များကိုအထိ အသုံးပြုသူတစ် ဦး စီ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Xiaomi စကေး အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီကိုအလိုအလျောက် detectယခင်ကမှတ်ပုံတင်လျှင်။ လုပ်ပါ အလေးချိန်နှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များ၏စာဖတ်ခြင်း, တိုက်ရိုက် အားလုံးအသုံးပြုသူဒေတာနှင့်အတူသိမ်းဆည်းထားသည် ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်။ ပြီးတော့တိုင်းတာမှုတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုပြတယ်။
ပုံစံ ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းမှုစကေး 2
compatibility iOS 9.0 နှင့်အထက်နှင့် Android 4.4 နှင့်အထက်ဖြစ်သည်
တိုင်းတာခြင်းယူနစ် Kg - Lb - Jin
ဘက်ထရီ 1.5V AAA
တိုင်းတာခြင်းအကွာအဝေး 150 ကီလိုဂရမ်အထိ
စကေးဌာနခွဲ 50 ဂရမ်
ရှုထောင့် 300 300 25 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 1.7 ကီလိုဂရမ်
ဝယ်ယူ link ကို ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းမှုစကေး 2
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » Xiaomi Mi ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုစကေး2စကေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ